I-Hay Barn @ Mulfra - inqolobane enhle yokuziphakela - I-Airbnb
I-Hay Barn @ Mulfra - inqolobane enhle yokuziphakela
New Mill, England, i-United Kingdom
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Deb
U-Deb uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-100% wezivakashi zakamuva.
Okusha kwango-2019! -Ukuguqulwa kwengodi ye-granite ethandekayo ne-quirky ku-AONB - indawo enhle, enokuthula endaweni yasemakhaya yaseMulfra. I-Iron Age settlement kanye ne-Quoit kungaphakathi kwebanga lemizuzu eyi-10 lokuhamba lapho ukubukwa okumangalisayo kuzo zombili izinhlaka kungabonakala. Indawo yokupaka yangasese ene-gated kanye nengadi enhle ebiyelwe eneqhugwana likamalusi elihle lihlinzekwa kule ndawo. Endaweni enhle yasemaphandleni ngakho imoto ibalulekile. Ilungele izithandani kodwa futhi ifanele umbhangqwana onengane endala noma umzali.
Lesi sikhala esihle uma ufuna ikotishi lakho ukuze uhlole iWest Penwith ngemoto. Kuhle uma ufuna indawo enokuthula ukuze uphumule kude nomzila wezokuvakasha isikhathi esithile sokuphumula. Abahambi bayayithanda le ndawo njengoba kwenza Abaculi nabathwebuli bezithombe njengoba igcwele izilwane zasendle kanye nokubukwa okumangalisayo. Izivakashi zethu eziningi ziletha amabhodi azo okuntweza kanye nezingubo ezimanzi ukuze zichithe isikhathi sazo emabhishi asendaweni amangalisayo phakathi kwemizuzu engu-20-30 yokushayela. Uma ungafuni ukubalekela ubuchwepheshe kukhona i-broadband enesivinini esiphezulu kanye ne-smart screen ye-32" ye-smart TV lapho ungavele ungene ngemvume nge-Netflix yakho noma i-akhawunti eyinhloko ye-Amazon ukuze uthole amasethi amabhokisi akho.
Kuncane kakhulu ukungcoliswa kokukhanya futhi izinkanyezi ziyamangalisa lapha phezulu, zikhanya kodwa zinamathuba amaningi okubona izinkanyezi ezidubulayo ngobusuku obucwathile. I-Mulfra isendleleni yamatomu ngakho ahlala enethuba lokubona amahhashi amahle ehamba ebuyela ezitebeleni zawo kusihlwa.
We are a professional couple with a Celtic heritage enjoying life in West Penwith in Cornwall. We like to enjoy the beautiful beaches and good food associated with West Cornwall and are keen supporters of Arts and Crafts. We have good friendships across the LGBT+ community and welcome everyone of any background to come and stay. Favourite travel destinations are India, Nordic countries and Santorini where we love to explore the local culture and then relax with a few good books. As hosts we provide a warm welcome and are there if you need us throughout your stay to provide local recommendations or advice as we live in the same Hamlet as the property.
We are a professional couple with a Celtic heritage enjoying life in West Penwith in Cornwall. We like to enjoy the beautiful beaches and good food associated with West Cornwall an…
Sihlala kwenye yezinye izinqolobane e-Hamlet ngakho siseduze kakhulu nganoma yiluphi usizo noma iseluleko endaweni yangakini.
Hlola ezinye izinketho ezise- New Mill namaphethelo